နှာခေါင်းစည်း (mask) မတပ် မနေရ အမိန့်နှင့် အခုထိ ခေါင်းမာနေသေး တဲ့ ရွှေမြန်မာ တချို့ – Let Pan Daily
နှာခေါင်းစည်း (mask) မတပ် မနေရ အမိန့်နှင့် အခုထိ ခေါင်းမာနေသေး တဲ့ ရွှေမြန်မာ တချို့
မနက်တုန်းက လမ်း သွားရင်း အန်တီကြီးတစ်ယောက် စကားလေးကိုကြားလိုက်ရပြီး မိမိကကြားထဲကနေ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာလေးတခုကို ပြောပြပါရစေ
အန်တီကြီးက “ငါ့ကိုအေ mask မတပ်ဘူးလား တပ်ရမယ်လေ လို့လာပြောကြတယ် ငါကလဲပြန်ပြောလိုက်တယ် အဲ့ရောဂါနဲ့သေမဲ့သူက သူ့ဘာသာသူသေမှာပဲလို့ mask တခု ကိုလဲ ၃, ၄,၅၀၀ ငါဝယ်မတပ်နိုင်ပါဘူး လာပြီးအပိုတွေလုပ်မနေနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်”
ဟာ ..အဲ့စကား ကိုကြားပြီး သူဟာ စာမတတ်ပါလားလို့ ကိုယ်သိလိုက်ရပြီ သူပြောတဲ့ “mask တခု၃,၄,၅၀၀ ငါဝယ်မတပ်နိုင်ပါဘူး”တဲ့ သူရဲ့အနေအထားက အဲ့လောက်ကြီးဆင်းရဲနေတဲ့ သူမဟုတ်လောက်ပါဘူး(လက်မှာတော့ လက်ကောက်နှစ်ကွင်းတော့တွေ့တယ် ပြောရင်အရှည်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ထားတော့)
သူကပဲဆက်ပြောသေး တယ် (မိမိနားကလဲ ကြားဖြစ်အောင်ကြားလိုက်သေးတယ် အာရုံထားမိနေလို့ဖြစ်မယ်) ဒါနဲ့.. “တစ်ခုလောက်တော့ လိုရမယ်ရ ပိုက်ဆံအိတ် ထဲဆောင် ထားတယ်တဲ့ စစ်ဆေးရေး နေရာတွေ တွေ့ရင်ကောက်တပ်လိုက်တယ် ရှုပ်တယ် အသက်ရှူရကျပ်ရကျပ်နဲ့”တဲ့
ကဲအေးရောပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုလူမျိုးလေးတွေ ရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ် သူပြောသွားတာလေးတွေပြန်ကောက် ပြောရရင် ဘာ “အဲ့ရောဂါနဲ့သေမဲ့လူက သေမှာပဲ”တဲ့ ဟုတ်တယ် မှန်တာပေါ့ သို့သော် ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲသေမှာလား? ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရော မကူးစက်နိုင်ဘူးတဲ့လား? ဒါတွေကိုထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်လေ။
လူဆိုတာ သေနေ့စေ့ရင်သေရမှာပဲ ဘယ်သူမှ တားလို့မရဘူး(မိမိတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရ)ဒါပေမဲ့ ဒီပိုးဟာ မိမိတစ်ယောက်ကိုကူးပြီးရင် မိမိနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူတွေကို ဆက်လက် ကူးစက်တဲ့ သဘောလေ ကိုယ့်ကြောင့်ကိုယ့်မိသားစု (အထဲမှာ သက်ကြီးရွယ်အို နဲ့ကလေးတွေပါရင်ပိုဂရုစိုက်သင့်)နဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုပါကူးသက်စေ နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆင်ခြင်စဉ်းသင့်တယ်လေ (သိလို့ တတ်လို့ ဆရာမကြီးလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး စဉ်းစားမိတာလေးကို ပြောတာပါ)
ရာခိုင်နှုန်ူအားဖြင့် ဒီရောဂါ ကို အရမ်းကြောက်တဲ့လူနဲ့ လုံးဝမကြောက်တဲ့ လူတွက်ချက်ကြည့်လျှင် ၅၀/၅၀ ပါပဲ (ထင်တာပြောတာ) အခုအချိန်မှာ ဘယ်ဟာမှတွက်ချက် လို့မရသေးပါဘူးနော် ဒါကြောင့်မို့ မပေါ့ဆဘဲ ဆက်ပြီးဂရုတသိုက်လေးရှိကြပါဦးနော်။
စာကရေးရင်းနဲ့အရှိန်တက်ပြီး စာရှည် သွားပါတယ်(ရှာရှည်ပြီးရေးချ င်တာကိုး) အဆုံးထိ ဖတ်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ။
မနကျတုနျးက လမျး သှားရငျး အနျတီကွီးတဈယောကျ စကားလေး ကိုကွားလိုကျရပွီး မိမိကကွားထဲကနေ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျဖွဈနတောလေးတခုကို ပွောပွပါရစေ
အနျတီကွီးက “ငါ့ကိုအေ mask မတပျဘူးလား တပျရမယျလေ လို့ လာပွောကွတယျ ငါကလဲပွနျပွောလိုကျတယျ အဲ့ရောဂါနဲ့သမေဲ့သူက သူ့ဘာသာသူသမှောပဲလို့ mask တခု ကိုလဲ ၃, ၄,၅၀၀ ငါဝယျမတပျနိုငျပါဘူး လာပွီးအပိုတှလေုပျမနနေဲ့လို့ပွောလိုကျတယျ”
ဟာ ..အဲ့စကား ကိုကွားပွီး သူဟာ စာမတတျပါလားလို့ ကိုယျသိလိုကျရပွီ သူပွောတဲ့ “mask တခု၃,၄,၅၀၀ ငါဝယျမတပျနိုငျပါဘူး”တဲ့ သူရဲ့အနအေထားက အဲ့လောကျကွီးဆငျးရဲနတေဲ့ သူမဟုတျလောကျပါဘူး(လကျမှာတော့ လကျကောကျနှဈကှငျးတော့တှတေ့ယျ ပွောရငျအရှညျကွီးဖွဈသှားလိမျ့မယျ ထားတော့)
သူကပဲဆကျပွောသေး တယျ (မိမိနားကလဲ ကွားဖွဈ အောငျကွားလိုကျသေးတယျ အာရုံထားမိနလေို့ဖွဈမယျ) ဒါနဲ့.. “တဈခုလောကျတော့ လိုရမယျရ ပိုကျဆံအိတျ ထဲဆောငျ ထားတယျတဲ့ စဈဆေးရေး နရောတှေ တှရေ့ငျကောကျတပျလိုကျတယျ ရှုပျတယျ အသကျရှူရကပျြရကပျြနဲ့”တဲ့
ကဲအေးရောပဲ ပတျဝနျးကငျြမှာ ဒီလိုလူမြိုးလေးတှေ ရှိခငျြရှိပါလိမျ့မယျ သူပွောသှားတာလေးတှပွေနျကောကျ ပွောရရငျ ဘာ “အဲ့ရောဂါနဲ့သမေဲ့လူက သမှောပဲ”တဲ့ ဟုတျတယျ မှနျတာပေါ့ သို့သျော ကိုယျတဈယောကျထဲသမှောလား? ကိုယျ့ရဲ့မိသားစု အပေါငျးအသငျး မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှရေော မကူးစကျနိုငျဘူးတဲ့လား? ဒါတှကေိုထညျ့စဉျးစားသငျ့တယျလေ။
လူဆိုတာ သနေစေ့ရေ့ငျသရေမှာပဲ ဘယျသူမှတားလို့မရဘူး(မိမိတို့ရဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာအယူအဆ အရ)ဒါပမေဲ့ ဒီပိုးဟာ မိမိတဈယောကျကိုကူးပွီးရငျ မိမိနဲ့ထိတှဆေ့ကျဆံခဲ့သူတှကေို ဆကျလကျကူးစကျတဲ့ သဘောလေ ကိုယျ့ကွောငျ့ကိုယျ့မိသားစု (အထဲမှာ သကျကွီးရှယျအို နဲ့ကလေးတှပေါရငျပိုဂရုစိုကျသငျ့)နဲ့ ကိုယျခဈြခငျတဲ့သူတှကေိုပါကူး သကျစေ နိုငျတယျဆိုတာကိုဆငျခွငျစဉျးသငျ့တယျလေ (သိလို့ တတျလို့ ဆရာမကွီးလုပျတာတော့မဟုတျပါဘူး စဉျးစားမိတာလေးကို ပွောတာပါ)
ရာခိုငျနှုနျူအားဖွငျ့ ဒီရောဂါ ကို အရမျးကွောကျတဲ့လူနဲ့ လုံးဝမကွောကျတဲ့ လူတှကျခကျြကွညျ့လြှငျ ၅၀/၅၀ ပါပဲ (ထငျတာပွောတာ) အခုအခြိနျမှာ ဘယျဟာမှတှကျခကျြ လို့မရသေးပါဘူးနျော ဒါကွောငျ့မို့ မပေါ့ဆဘဲ ဆကျပွီးဂရုတသိုကျလေးရှိကွပါဦးနျော။
စာကရေးရငျးနဲ့အရှိနျတကျပွီး စာရှညျသှားပါတယျ(ရှာရှညျပွီးရေးခြ ငျတာကိုး) အဆုံးထိ ဖတျပေးလို့ကြေးဇူးပါ။
ရနျကုနျ မှာ ကိုဗဈထကျ ပိုဆိုး လာနိုငျတဲ့ တိတျတဆိတျ ဇီဝိနျခွှေ သမား (ကနျြးမာရေး အတှကျ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ)
အဖေ့ ကို လုပ်ကျွေး ပြုစုပြီး တစ်သက်လုံး ကျေးဇူးဆပ်မယ် ဆိုတဲ့ ရဲမေလေး . . .